DAAWO:-Baadari Reer Koonfur Africa Ah oo Sheegtay In Uu Qof Dhintay Soo Noolayn Karo | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Baadari Reer Koonfur Africa Ah oo Sheegtay In Uu Qof Dhintay Soo...
DAAWO:-Baadari Reer Koonfur Africa Ah oo Sheegtay In Uu Qof Dhintay Soo Noolayn Karo
Baadari reer Koonfur Afrika ah ayaa aad u dhaliilay mid kale oo uu ku eedeeyey inuu diinta “Masiixiyadda sharafta ka riday” kaas oo sheegtay inuu qof dhintay soo nooleeyey.
Paseka Motsoeneng oo ku magac dheer Mboro, oo hortaagan kaniisad xidhan oo uu baadari ka yahay Alph Lukau, ayaa ku dhawaaqayey “in la ii jawaabaan halkan u imid”.
Wuxuu sheegay in hadii ay run tahay in baadarigaa Alph leeyahay awood uu qof dhintay ku soo noolayn karo, inuu doonayo in ay isku raacaan xabaashii Nelson Mandela [oo soo nooleeyo].
Muuqaal dhacdadaa laga duubay oo muujinayey qof dhintay oo hadana ka soo toosaya naxashkii uu ku jiray, ayaa aad dadku ugu maadsadeen.
Muuqaalkaas ayaa muujinaya Lukau oo qaylinaya oo nin naxash dhex jiifa ku leh “toos”, ka dibna uu ninkii kor u soo fadhiisanayo iyo damaashaad dadkii kaniisadda ku cibaadaysanayey ay dhigayaan.
Shirkado ka shaqeeya aaska ayaa sheegay in la khiyaameeyey oo baabuurtooda loo adeegsaday si khalad ah
“Anigu halkan in aan cid la dagaalamo uma iman, waxan halkan u imid in ninka aanu Alla dartii walaalaha u nahay ii jawaabo” ayuu yidhi Motsoenegn, oo ah baadariga kaniisadda Incredible Happenings, oo ka hor dhawaaqayey kaniisadda Lukau baadariga u yahay oo ku taal meel Johannesburg u dhaw.
“Hadii ay run tahay in aad nin dhintay soo noolaysay, kaalay xabaasha Mandela aan isku raacno oo aad sidaas oo kale samayside” ayuu yidhi.
Hase ahaateen, Motsoeneng qudhiisa mar baa dadku ku maadsadeen uu sheegay in uu jannada tagay oo sawirro iskaga soo qaaday telefoonkiisa gacanta.
Madaxweynaha Koonur Afrika, Cyril Ramaphosa, ayaa isaguna Khamiistii dooddan socota soo galay oo yidhi waa in dawladdu ka hor tagto “hogaamiyeyaasha diimeed ee waxyaabaha aan la qaadan karin fala” ee dadka khiyaamaynaya.
“Ma doonayno in aanu farogelino diimaha ay dadku haystaan, laakiin waxa lagama maarmaan ah in aynu ka hadalno sida aynu wax uga qaban karno baadariyadaa beenaaleyaasha ah” ayuu yidhi Ramaphosa.
Previous articleShabaab oo weli kadagaalamaya wadada Maka Mukarama
Next articleHowlgal weli ka socda agagaarka Hotel Maka Al-Mukarama +SAWIRRO
DAAWO:-Wasiir Dubbe imaaraadka Carabta ma aqoonsana dowladnimada Soomaaliya